I-Chloe Warner yoyilo lweDollhouse eyiLayini njengoBomi boBomi boBomi bokwenyani - Unodoli Omhle
I-Chloe Warner yoyilo lweDollhouse eyiLayini njengoBomi boBomi boBomi bokwenyani
Iindaba ezimnandi, bathandi abancinci! Unodoli Omhle ibuyile kwiXesha lesi-2. Ngeli xesha, iNdlu entle inike abayili abathandathu baseCalifornia idrophouse yangoku yenkulungwane efanayo kunye ne- $ 500 yokuyihombisa nangayiphi na indlela abafuna ngayo. Uninzi lweKrazy Glue, ii-aksenti ze-DIY, kunye nezinto ezincinci kamva, sibonisa iDollhouse Enhle. Tune rhoqo ngolwesiBini ngesiqendu esitsha kwaye ubone ukuba umyili ngamnye uyile njani ubugcisa babo obuncinci.
UChloe Warner, umseki weRedmond Aldrich esekwe e-Oakland, waziwa ngokutyebile ngaphakathi. Kwaye xa isiza kuyilwa encinci yeDollhouse Enhle, uWarner akazange azibambe — enyanisweni, wahamba nkqu (ngokomfuziselo) enkulu. 'Impembelelo yam kule ndlu yayiyinto endisoloko ndifuna ukuyisebenzisa, kodwa ndingaze ndifumane mvume yokusebenzisa,' uhleka umyili. Ngaphandle komthengi, uxela, 'Khange ndibenakho ukulalanisa okanye ndifumane uqikelelo lohlahlo-lwabiwo mali okanye ndicele imvume. Ndenza nje nantoni na endifuna ukuyenza. '
Amakhaya wesitayile seKapa
Kwaye, kanye kanye, kubandakanya ntoni? Ndinesikali esikhulu, eludongeni oluphefumlelweyo lwaseGournay. Ndinemigangatho yesikhumba. Ndinomfanekiso wesiko, 'Uluhlu lweWarner. 'Ndinazo zonke ezi zinto ukuba ibiyindlu yokwenyani, ngekhe ibe yingxoxo, endaweni yoko kufuneka ndiyifumene.'
Apho unodoli uyenzile ukungqinelana neeprojekthi zakhe eziqhelekileyo zazikwinkqubo yoyilo: ' Inkqubo yam yoyilo yodoli iyafana nenkqubo yoyilo kunye nendlu yokwenyani, utshilo uWarner. 'Kuqala ngothando lokwenene lweepateni zokubeka, ubume kunye nombala. Ndaziva ndithintelwe yile nto ifumanekayo kwimarike yendlu, ngenxa yoko ndisebenzisa amaphephadonga kunye namalaphu kunye neesampulu endizokuzisebenzisa kwindlu yesiqhelo, kodwa ndakwazi ukuzinciphisa ndiziprinta kwiphepha elinomdla ukuze babe ziimaphu zam zamaphephadonga . '
Kwaye, uthi, 'Bendingafuni yonke into ukuba ibengumsebenzi wamaphepha kunye nonodoli, ke ndinesikhumba noboya kunye neLucite'-zonke izinto anokuzicacisa njengekhaya lokwenyani.
Jonga ukuba konke kuhlangana njani ngezantsi!
'Zininzi kakhulu iinguqu ngomzuzu wokugqibela,' utshilo uWarner yoyilo lokugqibela. 'Khange ndiqonde ukuba unodoli awuzange wenziwe njani - ucinga ukuba ugqibile, kodwa emva koko uthenga into, uthenga ii-intshi ezine zeencwadi ezincinane zoonodoli kuba zingcono kunezo wawunazo, emva koko wena' sizitshintshe ngomzuzu wokugqibela. '
Olunye utshintsho olubangelwa yimfuneko kwindlu kaWarner lweza ekhitshini: 'I-AGA yam encinci ayifikanga ngexesha, kwaye ke iofisi yam ibisandula ukukhupha zonke iindawo zokumisa, izama ukwenza ikhitshi ebingazinzanga kule AGA. ,' uthi. 'Kwakungobusuku obude emva kwexesha kunye nohambo oluninzi lokuya kwiLobby kaMichael kunokuba ndinomdla wokuqhubela phambili.' Kodwa, ngeglue eshushu, ubuchule, isitya se-porcelain, kunye nomgangatho weherringbone opholileyo kakhulu, konke kwahlangana ngokugqibeleleyo.
'Lo mzobo kaWalton Ford andikaze ndiwubone ebomini bokwenyani, kodwa uzisa ubushushu kwindawo ehleliyo, utshilo uWarner. Iinkcukacha zokufumana ulwazi ngolu hlobo (kunye nebhloko yeLucite edityaniswe nayo) yayiyinxalenye yolonwabo yeprojekthi, uthi: 'Ukuqala kwethu, bendinemibono engqongqo malunga nokuba unodoli uza kuhamba njani, kwaye bendicinga ukuba kufuneka iquke igumbi ngalinye elisendlwini, njengegumbi lokuhlambela kunye nekhitshi, utshilo umyili. Kwaye ke ndaphinda ndazama ukuyibeka yonke kwi-CAD ukuqala, kwaye kwafumana nje ukonwaba okuphindwe kalikhulu emva kokuba ndiqalisile ukuthenga amaqhekeza amancinci ndawabeka. '
Ndicinga ukuba olona celomngeni yayikukuba ndandingafuni zelaphu okanye izinto ezisemadongeni ukuba zingajongwa, utshilo uWarner. Kwaye kukho izinto endifuna ukuzisebenzisa ezibonakala zintle, ndaziva ndikhulu, ndahamba namanye amaqhekeza kwigumbi elithile, kodwa mhlawumbi babekhukhumele kakhulu okanye ndibabeka umda kubo kwaye baqala ukubonakala njengengubo endaweni yoko ikhaphethi. '
Kwigumbi lokutyela, uWarner wabeka itafile encinci kunye nezitulo ezigobileyo ezinamakhandlela amancinci-agcwele imisonto yokwenyani! I-chandelier encinci kunye nepeyinti engabonakaliyo igcwalisa ukujonga.
'Iinkcukacha ezinefuthe ngumxholo wendlu, utshilo uWarner. Ndiyabacaphukela xa abayili befana, 'Owu, ndiza kusebenzisa umbala wombala.' Ukuba usebenzisa umbala omnye wep pop, wonke umntu uza kuwuthiya kwiinyanga ezintathu. Isitshixo kukusebenzisa iipopu ezisixhenxe zento ethile. '
Thatha igumbi lokulala lonodoli, umzekelo, apho ibhedi egutyungelwe kwilaphu le-Decores Barbares elinephepha lodonga elinobungqongqo ngokulinganayo. 'Ayisiyondawo nje lodonga kuphela, lodonga olugqibeleleyo,' utsho uWarner wepateni, evela 'kumenzi wephepha lodonga awuthandayo,' inkampani yaseParis UAntoinette Poisson.
'Yehlisiwe ukuze isebenze apha. Kwaye emva koko ndayiprinta kule stock intle, ke igqibelele. Ndaye ke ndakhetha elinye ilaphu elihle lebhedi kwaye sine pilly pilly kunye ne rug encinci encinci. Ke ayifani naliphi na igumbi elixhoma inkcukacha enye. Bonke banamathela kwiinkcukacha ezininzi, kodwa yindlela esenza ngayo izinto kwaye kungenxa yoko kumnandi.
Kwithala, umngxunya omncinci womlilo kunye nesihlalo esinezinto zangoku esihlala phezu kwethayile 'yethayile' uWarner wazibeka kabuhlungu. 'Bendikwi-Hobby Lobby kwaye ndiyibonile le mveliso ingakholelekiyo apho kukho ubuhlalu obuncinci beglasi kwaye uyisebenzisa kwipateni yokuhombisa,' uyakhumbula. 'Kwaye kwathi qatha kum ukuba ndingenza ikhaphethi yala maglasi eglasi ngesitshixo sesiGrike, kwaye iyakulinganiswa ngokugqibeleleyo nendlu yam yonodoli.'
izityalo zevaranda engaphambili
'I-100 yeepesenti yam iphungulwe ngaphezulu kunokuba ndihlafuna,' uyavuma: 'Bendingazi ukuba kungathatha ixesha elingakanani. Kodwa kwakumnandi kakhulu. Kwaye kwigumbi ngalinye, ndiye ndabona ukuba kufuneka into enomdla kakhulu, enobuchule, eyenziweyo ngesandla — evakala ukuba yeyobugcisa kwaye ikhethekile. '
Endaweni yokukhetha igumbi lokuhlambela elahlukileyo, uWarner usete ibhafu eluphahleni lwethala leencwadi eliphakama kabini. 'Andiqondi ukuba ngendiyenzile ukuba ngendingafundanga incwadi engeyonyani malunga noWinston Churchill, owayedla ngokuthatha iintlanganiso ebhafini,' uyacaphuka. 'Ndicinge ukuba ndingadibanisa ukuhlamba kunye nokulandela ngokwengqondo kule ndawo iphindwe kabini.'
Elona candelo lalinzima kufakelo yayiludonga lwam kwishelufa yam yeencwadi, utshilo uWarner. 'Ngokuqinisekileyo ndilinganise kabini, kwaye ndizenzile ezi shelufu zencwadi kabini-kanye ngesikali esikhudlwana kwaye kanye ngesikali esifanelekileyo.'
Kodwa, njengakuyo nayiphi na into yokufaka, izinto zinokungahambi kakuhle ngomhla-we: 'Ndijonge isohlo nje ukufakwa kwishelufa yokuqala, endicinga ukuba iyakulunga kuba ndiyilungelelanisa emnyango. Kodwa emva koko iglu eshushu yavele yoma ngumkhenkce kwaye yayijongeka ngathi iyashukuma, kwaye ndandinoxinzelelo! '
Kodwa uWarner wayenza yasebenza: 'Ndifumene i-razorblade, sifaka ii-cornices ezintsha, safumana inqanaba elincinci e-ofisini kuba yile ofisi, kwaye ngoku ikhangeleka ilungile.'
Iipropathi ezingaphambi konxweme ezithengiswayo
Ukupeyinta udonga imibono yegumbi lokulala
iisayithi ukuzibona ecalifornia